Taageereyaasha Eng. Yuusuf Warsame Siciid oo Olole Nadaafadeed ka fuliyay Suuqa Gobanimo | Somaliland.Org
Taageereyaasha Eng. Yuusuf Warsame Siciid oo Olole Nadaafadeed ka fuliyay Suuqa Gobanimo
November 14, 2012	Hargeysa (Somaliland.Org)- Taageerayaasha musharax Eng. Yuusuf Warsame Siciid oo ka mid ah musharaxiinta xisbiga KULMIYE uga sharaxan magaalada Hargeysa ayaa shalay olale nadaafadeed ka fuliyay suuqa gobanimo ee magaalada Hargeysa.
Guddoomiyaha xisbiga KULMIYE Muuse Biixi Cabdi oo la hadlay taageerayaasha musharax Eng. Yuusuf Warsame Siciid ka dib markii ay olalahaa nadaafadeed fuliyeen ayaa waxa ugu baaqay inay codkooda siiyaan Yuusuf Warsame Siciid. Waxaanu tilmaamay inay Hargeysa ceeb ku tahay haddii ay cod badan ku soo saari waayaan waxaanu yidhi “Taageerayaasha xisbiga KULMIYE waxa aanu ka doonaynaa inay maanta codkooda na siiyaan sidii ay noo siiyeen tii madaxtooyada iyo tii golaha wakiilada iyo tii ka horaysaba.
Maantana dhamaan Somaliland dadkooda waxaanu ka rabnaa codka ugu badan inay KULMIYE siiyaan reer Hargeysa waxa laga rabaa 25 ka musharax inay soo saaraan oo odayga ugu wayn ee ugu waayo aragsan 25 ka Hargeysa ayay ceeb ku tahay haddii ay cod badan ku soo saari waayaan taagerayaasha la socda .”
“Waxaan ka rabaa nin waliba toban qof oo kale oo uu ku soo qanciyo inuu u codeeyo murashax Injineerka odayga ah ee marka uu da’da noqday waliba yidhi waan idiin shaqaynayaa waxa inoo balana maalinta codka iyo murashax Eng. Yuusuf Warsame Siciid,”ayuu yidhi Guddoomiyaha KULMIYE.
Wasiirka Wasaarada Caafimaadka Dr. Xuseen Muxumed Xoog oo isaguna halkaasi kala hadlay ayaa waxa uu sheegay in xisbiga KULMIYE doonayo inuu isbadalka sameeyo caasimada Hargeysa iyo gobolada dalka. Waxaanu yidhi ‘xisbiga KULMIYE balan ayuu qaaday in isbadal samaynayo labadii sanadood wuu sameeyay, waxaanu doonaynaa isbadalka caasimadaha isbadalka magaalooyinka inay nagala qaybqaataan musharixiinta Yuusuf Warsame Siciid oo kale waa nin ka aynu xilka caasimada ku aamini karno waa Hargaysaawi wadani asli Hargeisa oo dhan ayuu cod ka rabaa xaafad qudha kama rabo. Cod maanta Hargeisa uga lexo jeclo badani ma jirto waxaan u olalaynayaa in Hargeisa codka siiso.”
Waxa kalae oo isaguna halkaasi kala hadlay taageerayaasha Eng. Yuusuf Warsame Siciid guddoomiye ku xigeenka murashax Eng. Yuusuf Warsame Siciid waxaanu baaq u jeediyay taageereyaashiisa, waxanu yidhi “ waxaan aad iyo aad ugu mahad naqayaa weftigan culus ee madaxdii KULMIYE ah ee ina soo sharfay. Waxa kale oon aad iyo aad ugu mahad naqayaa ummaddaa doonaysa inay I taageerto ay Hargeisa u hiiliso. Waxa sharaf leh inagoo ku bilawnay iskaa wax u qabso oo aan ku bilawnay meelihii aan islahaa way ugu daran yihiin. Caafimadku waxa uu ka mid yahay nolosha bini’aadamka, waxaan waayo aragnimo u leeyahay in magaalo caafimaad qabta oo qurux badan aynu ku noolaano.”
Sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay guddoomiye ku xigeenka kowaad ee xisbiga KULMIYE Maxamed Kaahin Axmed iyo guddoomiyaha heer qaran ee haweenka Canab Cumar Ileeye ayaa waxa ay tilmaameen inuu musharax Yuusuf Warsame siciid wax ka badali doono caasimada Hargeysa. Waxaanay u soo jeediyeen inay codkooda siiyaan.
Previous PostMurashax C/Raxmaan Cali Giirre oo khudbad u jeediyay Taageereyaashiisa Magaaladda HargeysaNext Post“Rag baa ka sii Qaylinaya Doorashada waxa laga sii sheegayaa Nabadgalyo jiri mayso”	Blog